Ntụgharị nke “Ịjikọ Mkparịta ụka” Usoro nke Abụọ • Ọmụma ihe ịga nke ọma
Webinar Oge Ọgụgụ: 3 nkeji
Ntụgharị nke “Ịjikọ Mkparịta ụka” Usoro nke Abụọ
Nchịkọta akụkọ ihe mere eme nke ahụike ịmụ nwa na ndị ntorobịa
Sarah V. Harlan Ọgọst 19, 2020
Na Julaị 29, Ịga nke ọma ihe ọmụma na FP2020 kwadoro nnọkọ nke abụọ na usoro webinar ọhụrụ anyị, “Ijikọ Mkparịta ụka”-usoro mkparita uka banyere ahuike omumu nke ndi ntorobia na ndi ntorobia. Agbaghara webinar a? Ị nwere ike soro njikọ dị n'okpuru ebe a iji lelee ndekọ ahụ wee debanye aha maka nnọkọ n'ọdịnihu.
Jane Ferguson, MSW, MSc, bụ onye na-ekwu okwu nke abụọ a "Na-ejikọta mkparịta ụka" nnọkọ, "Ntụle akụkọ ihe mere eme nke ahụike ịmụ nwa na ndị ntorobịa." Okwu a tụlere isiokwu ndị a tụlere na nke anyị mbụ nnọkọ-nke mere ka ike mgbanwe nke oge ntorobịa pụta ìhè dị ka ọkwa ndụ - ma nyekwa oghere dị mkpa iji ghọta amụma ahụike ọmụmụ na ndị ntorobịa na ndị ntorobịa..
Ugbu a onye ndụmọdụ mba ụwa na ahụike na mmepe ntorobịa, Nwada. Ferguson rụrụ ọrụ na njedebe nke mmepe na ngalaba ahụike n'oge uto 30 afọ na World Health Organisation (WHO) na Geneva. Ahụmahụ ya gbasara amụma, ntuziaka teknụzụ, usoro nyocha, na nkwado mmemme na ihe dị iche iche gụnyere ahụike ọmụmụ, HIV, na ụmụ agbọghọ na-eto eto. Nghọta ya bara ụba na ihe ọmụma ya nyere aka nye isi nkuku dị mkpa ka anyị na-aga n'ihu na usoro usoro mbụ anyị na nghọta ntọala nke mmepe na ahụike ntorobịa..
Nwada. Ferguson enyochala usoro iheomume nke mmemme ahụike na akwụkwọ ndị ntorobịa zuru ụwa ọnụ kemgbe 1985, ma gosi obere Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) vidiyo: Ahụike maka Ndị Ntorobịa Ụwa. Na-ejegharị anyị site n'akụkọ ihe mere eme nke akụkọ na ụkpụrụ mba ụwa bụ ndị mebere mmemme ahụike ntorobịa zuru ụwa ọnụ na nke obodo n'oge ikpeazụ. 50 afọ, Nwada. Ferguson gosipụtara ọrụ dị oke egwu nke ndị na-eto eto na-arụ na ahụike na mmepe. O kwusikwara ike na ọ dị mkpa ileba anya ma okwu ndị mmadụ n'otu n'otu na nke ụlọ na-emetụta ahụike na ọdịmma nke ndị nọ n'afọ iri na ụma..
Lelee Ugbu a: 05:00-20:50
Gee ntị ugbu a: 05:00-20:50
Maka ọtụtụ nnọkọ, Mụ na Oriakụ nwere mkparịta ụka. Ferguson, na-ajụ ajụjụ ndị sonyere wetara. Na nzaghachi nye ajụjụ ndị a, ọ tụlere ọtụtụ ihe, gụnyere: ihe ịrịba ama kachasị mkpa na ihe ịma aka chere ihu n'ọhịa, nlekota na nlebanya nke mmemme ahụ ike ịmụ nwa, nkwado gọọmentị na-abawanye maka ahụike ịmụ nwa, itinye aka n'oge ntorobịa n'ime mmemme ahụike ọmụmụ nke ha, na ijikọta ahụike ịmụ nwa na mpaghara nlekọta ahụike ndị ọzọ.
Ọ kwụsịrị mkparịta ụka ahụ site n'inye ụfọdụ ndị ọkachamara na-eto eto ụfọdụ ndụmọdụ bara uru: O chetaara anyị na anyị enweela ọganihu dị ukwuu ma gbaa anyị ume ka anyị “na-enwe ihe ịga nke ọma” ka anyị na-agbalịsi ike ime ka ahụ́ ike ịmụ nwa n’oge ka mma gburugburu ụwa..
Lelee Ugbu a: 20:50-55:50
Gee ntị ugbu a: 22:01-59:50
Ngwaọrụ ahọpụtara nke a kpọtụrụ aha n'oge nnọkọ:
Ihe omume agbakwunyere maka ahụike nke ndị nọ n'afọ iri na ụma (AA-HA!)
Ihe omume zuru ụwa ọnụ maka ịlele ahụike ndị ntorobịa (GAMA) Portal data
Nkwupụta nkwonkwo WHO/UNFPA/UNICEF gbasara ahụike ọmụmụ (1989)
2014 Ahụike maka ndị na-eto eto nke ụwa
Jane Ferguson na-ekwu maka nkọwa akụkọ ihe mere eme banyere ahụike ịmụ nwa n'oge nnọkọ nke abụọ nke “Mkpakọrịta Njikọ” na July 29.
Agbagharala nnọkọ a? Lelee ndekọ ahụ!
Ị tụfuru nnọkọ a? Ị nwere ike ilele ndekọ webinar (dị na abụọ Bekee na French) ma jide n'aka tupu nnọkọ ọzọ na August 19, "Otu Ụkpụrụ Ọha na Ọdịbendị na-emetụta ma na-emetụta AYRH."
"Na-ejikọta mkparịta ụka" bụ usoro mkparita ụka gbasara ahụike ọmụmụ nwa na ndị ntorobịa—nke FP2020 na SUCCESS ihe ọmụma kwadoro.. N'ime afọ na-abịa, anyị ga na-akwado nnọkọ ndị a kwa izu abụọ ma ọ bụ karịa na isiokwu dị iche iche. Ị nwere ike na-eche, "Webinar ọzọ?"Echegbula onwe gị - nke a abụghị usoro webinar omenala! Anyị na-eji ụdị mkparịta ụka karịa, na-agba ume mkparịta ụka mepere emepe na inye oge buru ibu maka ajụjụ. Anyị na-ekwe nkwa na ị ga-alọghachi maka ihe ndị ọzọ!
A ga-ekewa usoro ahụ n'ime modul ise. Modul mbụ anyị, nke malitere na Julaị 15 ma na-agafe na Septemba 9, na-elekwasị anya na nghọta ntọala nke mmepe ntorobịa na ahụike. Ndị na-eme ihe ngosi—gụnyere ndị ọkachamara sitere na otu dị ka Òtù Ahụ Ike Ụwa, Mahadum Johns Hopkins, na Mahadum Georgetown-ga-enye usoro maka ịghọta ahụike ọmụmụ na ndị ntorobịa na ndị ntorobịa, na imejuputa mmemme siri ike na yana maka ndị na-eto eto. Modul ndị na-esote ga-emetụ aka na isiokwu nke imeziwanye ihe ọmụma na nkà ndị na-eto eto, na-enye ọrụ, na-eke gburugburu na-akwado, ma na-agwa ụdị dị iche iche nke ndị na-eto eto.
Debanye aha maka "Ijikọ Mkparịta ụka"
Ndị ndu otu mmekọ, Ọmụma ihe ịga nke ọma, Johns Hopkins Center maka Mmemme Nkwukọrịta
Sarah V. Harlan, MPH, abụrụla onye mmeri maka ahụike ọmụmụ na atụmatụ ezinaụlọ zuru ụwa ọnụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ. Ugbu a ọ bụ ndị otu mmekọ na-eduga maka ọrụ Ọmụma SUCCESS na Johns Hopkins Center for Communication Programs.. Mmasị teknụzụ ya gụnyere ọnụ ọgụgụ mmadụ, Ahụike, na gburugburu (PHE) na ịba ụba nke ụzọ mgbochi ime ogologo oge. Ọ bụ onye rụpụtara atụmatụ ịkọ akụkọ olu atụmatụ ezinụlọ (2015-2020) na onye na-ede akwụkwọ nke ọtụtụ ụzọ-nduzi, gụnyere mmemme iwulite mma: Ntuziaka nzọụkwụ site na iji njikwa ihe ọmụma na ahụike zuru ụwa ọnụ.
Na-ekwupụta mwepụta nke NextGen RH
Senegal na-egosi ụzọ site na "enyemaka ndị ọgbọ"